लोक दोहोरी भिडियोमा नौलो प्रयोग, ‘चौतारी विसौनी’ बोलको गीत सार्वजनिक « रिपोर्टर्स नेपाल
लोक दोहोरी भिडियोमा नौलो प्रयोग, ‘चौतारी विसौनी’ बोलको गीत सार्वजनिक
काठकाडौैं, १९ भदौ । सधै आफुले निर्देशनगर्ने भिडियोमा केही न केही नयाँ प्रयोगगर्ने युवा निर्देशक हुन सिर्जन बराल । चलचित्रको भिडियोमा होस या आधुनिक गितको भिडियोमा होस् वा लोक दोहोरीको भिडियोमा नयाँ शैली र प्रस्तुती देखाउन सिर्जन कन्जुस्याई गर्दैनन ।
उनै युवा निर्देशक बरालको निर्देशनमा ‘चौतारी विसौनी’ बोलको म्युजिक भिडियो सावर्जनिक भएको छ । म्युजिक भिडियोको क्षेत्रमा पहिलो पटक एक्सन प्रदान म्युजिक भिडियो चौतारी विसाउनीको म्युजिक भिडियो शुक्रवार सार्वजानिक गरिएको हो ।
म्युजिक भिडियोको स्वयम निर्देश सिर्जन बरालले नै खतरनाक स्टण्ड देखाएका छन्।उनले एक्सन प्रदान म्युजिक भिडियो चौतारी विसाउनी निर्देशन गरेर आफुलाई एक्सन स्टार निर्देशकको रुपमा आफुलाई चिनाएका छन् ।
यस भन्दा अघि पनि कैयौ चर्चित म्युजिक भिडियो दिईसकेका निर्देशक बरालले अब भने एक्सन स्टार निर्देशकको रुपमा समेत आफुलाई उभ्याएका छन। आगामी दिनमा पनि आफुले भिडियोमा सधै चुनौती मोलेरै भएपनि अरुले भन्दा नयाँ प्रयोग पस्किने बरालले बताए ।
सिर्जन बुढाथोकीको शब्द, चन्दन ओलीको लय रहेको गितमा चन्दन ओली र टिका पुनले स्वर दिएका छन् । गितको छायाँकन रेशम दर्लामीले गरेका हुन् ।
भिडियोमा अभिनय नृत्यमा सिर्जन बराललाई चर्चित मोडल निरुता शाही ठकुरीले साथ दिएकी छिन । भिडियोलाई सारदा म्युजिक प्रालीले बजारमा ल्याएको हो ।
भिडियोस् हेर्नुहोस –
आर्यन खान ड्रग्स केसः एनसीबीको टोली शाहरुखको घर ‘मन्नतमा’
एजेन्सी, ४ कात्तिक । भारतीय नारकोटिक कन्ट्रोल एजेन्सीले आर्यन खानको निजि निवास मन्नतमा पुगी खोज
जेलभित्र के खान्छन् शाहरुखका छोरा आर्यन खानले ?
एजेन्सी, ४ कात्तिक । लागुऔषध मुद्दामा हिरासतमा रहेका बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानले
शाहरुख खान छोरा आर्यनलाई भेट्न पुगे आर्थर रोड जेल, भेटमा के भने ?
एजेन्सी, ४ कात्तिक । बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खान बिहीबार लागुऔषध मुद्दामा जेलमा रहेका आफ्नो छोरा
ओलीको प्रंशसामा ब्यस्त करिश्मा भन्छिन्, ‘बा यत्तिकै भएको होइन रहेछ’
काठमाडौं, ४ कात्तिक । नेपाली चलचित्रकी सदावहार अभिनेत्री हुन्–करिश्मा मानन्धर । उनले पछिल्लो समयमा चलचित्रमा
काठमाडौं, ३ कात्तिक । ऋषिराज आचार्यको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्र ‘चुरिफुरी’ को प्रदर्शन मिति